Warbaahinta danwaa Media Network » Beesha Sade Mareexaan oo Bayaan Kasoo Saartay Xaaladaha Jubba-land
Dibad Bax balaaran oo lagu taageerayo Ra’izul Wasaaraha Cusub oo ka soconaya Gedo Ahlu Sunah oo soo dhaweeyay magacaabida Riasul wasaaraha cusub Howlgallo dad lagu soo qab-qabtay oo laga sameeyay magaalada Kismaayo Shabaab oo sheegay in Kay & Musavani ay saxiixeen RW Cabdi Weli. RW Cabdi Wali ma jiri doono Khilaaf Dhex mara Madaxda Dalka blog analytics
Beesha Sade Mareexaan oo Bayaan Kasoo Saartay Xaaladaha Jubba-land
July 21, 2013 - Written by Kismaayo office - Edited byKismaayo office Waxgaradka Beesha Sade Mareexaan ayaa waa wayadan u socday kulamo iyo wada xaajood sidii beesha looga samata bixin lahaa in ay ku hoobtaan Dhalinayarad beesha dagaalo iyo colaado ay lagasho beeshu Dowalda Jubba-land .
Wada xaajoodkan oo mudo socday ayaa waxaa guntii iyo gaba gaba gabadii kasoo baxay bayaan baaq loogu dirayo dhamaan dadka ku abtirsada Beesha Mareexaan.
Bayaankan oo noqol kamid ah lasoo gaadhsiiyay warbaahinta Danwaanews.com ayaa waxa uu u qoraa sida tan.
Bayaanka Beesha Sade Mareexaan
Anagoo kuhadlayno magaca waxgaradka iyo aqoon yahanka beesha sade waxaan halkaan baaqan uga diraynaa dhamaan beesha sade meelkastooy joogaan.
Waxaa noo muuqatay khatar wayn oo siyaadeed iyo mid deegaaneedba iyo mid dhaqaale inay soo wajahday beesha sade ee jubooyinka kadib dagaaladii kismaayo kadhacay, waxaa cad in ciidamadii kismaayo kabaxay oo barre aadan shire hogaaminayay inay ku dhawaaqeen dagaal dowlada keeynya kadhan ah, inay isbahaysanayaan kooxda al-shabaab.
in gudoomiyaha gobolka gedo maxamed cabdi kaliil uu kudhawaaqay dagaal keenyo kadhan ah, in qaarkamid jaaliyadaha dibadda ay dagaal kadhanah wadamada dariska ku baaqayaan iyo in qaarkamid ah websaydyada lagu daabacayo in beesha sade ladagaalanto dowlada keenya iyadoo beeshu u taagan tahay wadani nimadii umadda soomaaliyeed iyo inay qorayaan in dadku kaqaxaan dhulkoodi ayna muuqato in maro loo lulayo si loo barakiciyo.
Arimahaas aan soo sheegnay waxay dhaawac wayn u gaysteen ama ugaysanayaan midnimadii, siyaasadii, degaamadii, bulshadii, dhaqaalihii, waxayna saameyn toosah ku yeesheen nolosha qofkastoo beesha sade dal iyo dibadba.
Waxay kaloo wax u dhimeen xiriirka wadamada aan xuduudka laleenahay oo maantay ayagu siyaasada soomaaliya ama sitoos ah u maamulo ama si dadban
Sidaa darteed waxaa lagama maarmaan ah inaan bulsho waynta beesha sade u soo gudbino bayaankan, oo ujeedadiisi tahay inaan mustaqbalka iyo istaraatiijiyadda siyaasadeed ee beesha aan la khaldin iyadoo magacii beesha la’isticmaalayo.
1 Waxaan cadeynaynaa in beesha sade aysan al-shabaab kamid ahayn, barre hiiraale iyo kooxda lasocotana ma matalaan beesha sade mana ku hadli karaan magaceeda.
2- Waxaan aad uga xunnahay dagaaladii iyo dhibkii kadhay magaala kismaayo oo sababay dhimasho, dhaawac, barakac iyo burbur.
3- Waxaan ku baaqaynaa inaan dagaal dambe dhicin lagana fogaado wixii dagaal keeni karo.
4- In nabadda laga wada shaqeeyo dadka shacabka ah ee magaalada kismaayana aan labara kicin
5- In dhamaan dadkii kaqaxay ama kabarakacay magaalada dib ugu soo noqdaan guryahoodi iyo degaanadoodi.
6- Inaan beesha sade lagu shaabadeyn al-shabaab, dadka arinkaas wadana laga soo horjeesto.
7- Inaan wadamada dariska oon xuduuda dheer wadaagno dagaal loo iclaamin
8- In beesha sade ay ogaato inay awoodo heer caalami ah iyo mid heer gobol ah ay arinka jubooyinka kuloolamayaan.
9- In midmimo beesha sade la raadiyo, hadii lawaayo, in ciddii dowlada iyo xamar ku qanacsan lagu tixgalyo ciddii jubba-land ku qanacsana lagu tixgaliyo.
Waad mahad san tihiin qoraalkan waxaa masuuliyadiisa iska leh, aqoon yahanka beesha sade nairoobi keenya waxaadna nagala soo xirii kartaan.
Last reply was 4 months ago	samadoon	View
ACWW Taliye away magacyadii aqoonyahanada??????
Waa raiyi fiican oo aqliga u saaxiib ah,
Ninkii diidana waa dabaal.
Haddii ummaddu dasbagasho nin waalan sida huuraale,
wallee way jabi.
danwaa xageey ka keentay mareexaan nabad ku baaqaya waxaan webkooda ka aragnaa iyo col ku baaqaya gaarahaan waliba nin dhaqan sheeganayo iyo kuwo saraakiil ciidan sheeganayaba
waxaan se garan la ahay goorta iyaga kaliya ay noqdeensoomali
Reply	dalma	View
waxaa layidh ninkii sojogso laga waayo waxaa laga helaa waxaad kugarankartaa away marexaan waxay umalaynayeem in bare sida babk uqarxi dona lakin waa ilaahay mahadii hadii uu fadhiyo me kaneecanadan
Dibad Bax balaaran oo lagu taageerayo Ra’izul Wasaaraha Cusub oo ka soconaya GedoDecember 13, 2013
Ahlu Sunah oo soo dhaweeyay magacaabida Riasul wasaaraha cusubDecember 13, 2013
Howlgallo dad lagu soo qab-qabtay oo laga sameeyay magaalada KismaayoDecember 13, 2013
Shabaab oo sheegay in Kay & Musavani ay saxiixeen RW Cabdi Weli.December 13, 2013
RW Cabdi Wali ma jiri doono Khilaaf Dhex mara Madaxda DalkaDecember 13, 2013
TOP: Wax ka baro taariikhda ra’iisul wasaaraha cusub ee SoomaaliyaDecember 13, 2013
Maqaal:Ha Moogaanin Hana Il duufin Doorkaaga.December 12, 2013
Maamulka KMG ee Juba oo Fariin udiray Iftiin Xasan Baasto,Bare Hiiraale iyo Waliba Cumar BuraaleDecember 12, 2013
Ugaaska Beesha Biya-Maal oo qaadacay Shirka Baydhabo ee lagu dhisayo MaamulDecember 12, 2013
Beledweyne oo degan kaddib maalmo dibadbaxyoDecember 12, 2013
Cunug ku dhintay, lix ku dhaawacantay dab ka kacay tuulada Booco, GedoDecember 12, 2013
Wararkii ugu dambeeyay ee aqalka madaxtooyada iyo RW cusub.December 12, 2013
Xildhibaanno ku kala aragti duwan hannaanka maamul u samaynta gobollada Koonfur GalbeedDecember 12, 2013
8 qof oo ku dhimatay dagaal beeleed mar kale ka dhacay Kabxanley, HiiraanDecember 12, 2013
Ciidamada Faransiiska oo la wareegay howlgal ka socda SomaliyaDecember 12, 2013
Maqaal: Gaari garoobowday cid waliba haweysatay !!!!!!December 11, 2013
War Deg Deg Ah:Madaaaxa Warbaahinta Danwaa media network Abdirashiid dhanaane oo Kadagay Caasimada Jigjiga.December 11, 2013
Bisshaaro luuqada afsomaaliga oo lagu daray luugaha Google translateDecember 11, 2013
Madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole oo dib ugu laabtay GarooweDecember 11, 2013
Masuul lagu dilay Kismaayo ee Maamulka jubbaDecember 11, 2013